သူ့အပေါ် တောက်လျှောက် ဝေဖန်မှုတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို — Sports Myanmar
သူ့အပေါ် တောက်လျှောက် ဝေဖန်မှုတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
May 5, 2019 - by Edi Tor
ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒို က သူဟာ နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း ကစားသမားကောင်း တစ်ဦး ဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ အတွက် တွန်အားပေးခြင်း ခံနေရတာတွေကို စိတ်ညစ်ညူးလာပြီလို့ ဆိုလိုက်ကာ သူ့ကို ဝေဖန်သူတွေ အနေနဲ့ ဝေးဝေး မှာသာ နေရန် ပြောလိုက် ပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ် နဲ့ ပေါ်တူဂီ စတား ဟာ ဘလွန်းဒီအော ဆုနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလားတွေကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ပြီး ဘောလုံး သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ကစားသမား တွေထဲက တစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ် ထားခြင်း ခံထား ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ် အသင်း နဲ့ အတူ ဒီရာသီမှာ စီးရီးအေ ဖလား ရရှိ ခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၃၄ နှစ် အရွယ် ရော်နယ်ဒို ဟာ လက်ရှိ မှာတော့ မတူညီတဲ့ နိုင်ငံ ၃ ခုမှာ အမှတ်ပေးဖလား ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ လိဂ်ပွဲစဉ် ၂၉ ပွဲမှာ ၂၁ ဂိုး သွင်းယူ ထားခဲ့ကာ စီးရီးအေ ရဲ့ ဂိုးသွင်း ဘုရင်ဆုကို ရည်မှန်း နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ရော်နယ်ဒို ဟာ သူ့ရဲ့ မဟာ ပြိုင်ဘက် လီယွန်နယ်မက်ဆီ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကာ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ေ၇ာ်နယ်ဒို က “တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ညစ်ညူးစေတာ ပင်ပန်းစေတာကို ကျွန်တော် မငြင်းလို ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း အရမ်း ကောင်းတဲ့သူ ဆိုတာကို မဖြစ်မနေ သက်သေ ပြနေရ သလို ပါပဲ။ ဒါဟာ ခက်ခဲ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ဘဲ လူတွေကို တစ်စုံတစ်ရာ သက်သေ ပြဖို့ အတွက် အပို ဖိအားတွေ မဖြစ်မနေ ရနေပါတယ်။ ကိုယ့်ဘေး က လူတွေကော ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်သား တို့ကိုပါ သက်သေ ပြပေးရ ပါတယ်။ ‘ခရစ် မနက်ဖြန် မင်း နိုင်မှ ဖြစ်မယ်”
ဒါဟာ ကျွန်တော့်ကို ပိုမို တက်ကြွ စေပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ အမြဲတမ်း လေ့ကျင့် နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ‘ငါကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးပါ’ လို့ ပြောတဲ့ အချိန်လည် ရှိမှာပါ။” လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ရော်နယ်ဒို က “ကျွန်တော်ဟာ စက်ရုပ်တစ်ဦးဆိုပြီး သူတို့ ယုံကြည် နေကြတယ်လို့ မထင်မိ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့မှ ပြသနာ မရှိတဲ့ လူ ၊ ဘယ်တော့မှ ၀မ်းမနည်း နိုင်တဲ့သူ ၊ ဘယ်တော့မှ ပြသနာ ရှိမလာနိုင်တဲ့သူ လို့ မြင်နေပါတယ်။
လူတွေဟာ အောင်မြင်မှု ငွေကြေး တွေနဲ့ တိုင်းပြီး ပြသနာ မရှိဘူးလို့ သတ်မှတ် နေကြတာ နေမှာပါ။ မင်းမှာ ငွေကြေး သန်းပေါင်းများစွာ ရှိနေပြီး ဘာလို့ ၀မ်းနည်းတာ စိတ်ဓာတ်ကျတာ ဖြစ်နိုင်မှာလဲ ? ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီအခြေအနေကို မဖြတ်သန်းဘူးတဲ့ လူတွေကို နားလည် ရပါမယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒါတွေကို နားလည်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ခရစ်စတီယာနို ပင်နယ်တီ လွဲတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေမှာ ကျရှုံးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို အခြေအနေ ကို လက်နက်ပြင်ပြီး အသင့်စောင့် နေမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြင်ဆင် ထားရမှာပါ။ ကျွန်တော်ဟာ အခုထိ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြင်ဆင် ထားခဲ့ပြီး ပါပြီ။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရော်နယ်ဒို ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘ၀ ကို ပျော်ရွှင် နှစ်သက်နေပြီး သူ့အနေနဲ့ ဝေဖန်သူတွေကို ဆက်လက် အံ့အားသင့်စေဖို့ အတွက် မျှော်လင့် ထားတယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီ စတား က “ဘောလုံးကို ဆောင်ရွက် ရမယ့် တာဝန် တစ်ခုလို့ ကျွန်တော် မြင်ထားပါတယ်။ ကွင်းထဲကိုသွား ၊ အနိုင်ယူ ၊ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ကို ပိုကောင်း စေပါတယ်။ ကွင်းထဲကို သွားပြီး ငါလိမ်ခေါက်တာတွေ လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ကာလတွေဟာ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် အခုချိန်မှာ မရှိတော့ ပါဘူး။
အပိုဖိအားတွေ ရှိနေပါတယ်။ လူတွေဟာ အမြဲတမ်း အကဲဖြတ် နေပါတယ်။ ‘သူရဲ့ အကောင်းဆုံး အချိန်တွေ ပြီးသွားပြီ။ သူဟာ ၃၃ ၊ ၃၄ ၊ ၃၅ ရှိသွားပြီ။ သူနားသင့်ပြီ။’ အဲဒီလို မျိုးရင် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လူတွေကို အံ့အားသင့် စေချင်ပါတယ်။” လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
သူ့အပျေါ တောကျလြှောကျ ဝဖေနျမှုတှကေို ပွငျးပွငျးထနျထနျ တုနျ့ပွနျလိုကျတဲ့ ရျောနယျဒို
ခရဈစတီယာနို ရျောနယျဒို က သူဟာ နှဈတိုငျး နှဈတိုငျး ကစားသမားကောငျး တဈဦး ဆိုတာကို သကျသပွေဖို့ အတှကျ တှနျအားပေးခွငျး ခံနရေတာတှကေို စိတျညဈညူးလာပွီလို့ ဆိုလိုကျကာ သူ့ကို ဝဖေနျသူတှေ အနနေဲ့ ဝေးဝေး မှာသာ နရေနျ ပွောလျိုကျ ပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျ နဲ့ ပျေါတူဂီ စတား ဟာ ဘလှနျးဒီအော ဆုနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဆုဖလားတှကေို ပိုငျဆိုငျ နျိုငျခဲ့ပွီး ဘောလုံး သမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး ကစားသမား တှထေဲက တဈဦး အဖွဈ သတျမှတျ ထားခွငျး ခံထား ရသူ ဖွဈပါတယျ။ ဂြူဗငျတပျ အသငျး နဲ့ အတူ ဒီရာသီမှာ စီးရီးအေ ဖလား ရရှိ ခဲ့ပွီးနောကျ အသကျ ၃၄ နှဈ အရှယျ ရျောနယျဒို ဟာ လကျရှိ မှာတော့ မတူညီတဲ့ နိုငျငံ ၃ ခုမှာ အမှတျပေးဖလား ကို ဆှတျခူး နိုငျခဲ့တဲ့ ကစားသမား ဖွဈလာ ခဲ့ပွီး ဒီရာသီ လိဂျပှဲစဉျ ၂၉ ပှဲမှာ ၂၁ ဂိုး သှငျးယူ ထားခဲ့ကာ စီးရီးအေ ရဲ့ ဂိုးသှငျး ဘုရငျဆုကို ရညျမှနျး နပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ရျောနယျဒို ဟာ သူ့ရဲ့ မဟာ ပွိုငျဘကျ လီယှနျနယျမကျဆီ နဲ့ နှိုငျးယှဉျကာ ဝဖေနျ တိုကျခိုကျမှုတှကေို ခံနရေဆဲ ဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျဒို က “တဈခါတဈရံမှာ ဒါတှဟော ကြှနျတေျာ့ကို စိတျညဈညူးစတော ပငျပနျးစတောကို ကြှနျတျော မငွငျးလို ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကြှနျတျောဟာ နှဈတိုငျး နှဈတိုငျး အရမျး ကောငျးတဲ့သူ ဆိုတာကို မဖွဈမနေ သကျသေ ပွနရေ သလို ပါပဲ။ ဒါဟာ ခကျခဲ ပါတယျ။ ကြှနျတျောဟာ ကိုယျ့အတှကျ မဟုတျဘဲ လူတှကေို တဈစုံတဈရာ သကျသေ ပွဖို့ အတှကျ အပို ဖိအားတှေ မဖွဈမနေ ရနပေါတယျ။ ကိုယျ့ဘေး က လူတှကေော ကိုယျ့အမေ ကိုယျ့သား တို့ကိုပါ သကျသေ ပွပေးရ ပါတယျ။ ‘ခရဈ မနကျဖွနျ မငျး နိုငျမှ ဖွဈမယျ”
ဒါဟာ ကြှနျတေျာ့ကို ပိုမို တကျကွှ စပေါတယျ။ ကိုယျ့အနနေဲ့ အမွဲတမျး လကေ့ငျြ့ နရေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ ‘ငါကို ဒီအတိုငျး လှတျပေးပါ’ လို့ ပွောတဲ့ အခြိနျလညျ ရှိမှာပါ။” လို့ ပွောသှား ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ရျောနယျဒို က “ကြှနျတျောဟာ စကျရုပျတဈဦးဆိုပွီး သူတို့ ယုံကွညျ နကွေတယျလို့ မထငျမိ ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ ကြှနျတေျာ့ကို ဘယျတော့မှ ပွသနာ မရှိတဲ့ လူ ၊ ဘယျတော့မှ ၀မျးမနညျး နိုငျတဲ့သူ ၊ ဘယျတော့မှ ပွသနာ ရှိမလာနိုငျတဲ့သူ လို့ မွငျနပေါတယျ။
လူတှဟော အောငျမွငျမှု ငှကွေေး တှနေဲ့ တိုငျးပွီး ပွသနာ မရှိဘူးလို့ သတျမှတျ နကွေတာ နမှောပါ။ မငျးမှာ ငှကွေေး သနျးပေါငျးမြားစှာ ရှိနပွေီး ဘာလို့ ၀မျးနညျးတာ စိတျဓာတျကတြာ ဖွဈနိုငျမှာလဲ ? ကိုယျ့အနနေဲ့ ဒီအခွအေနကေို မဖွတျသနျးဘူးတဲ့ လူတှကေို နားလညျ ရပါမယျ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ဒါတှကေို နားလညျပါတယျ။ လူတှဟော ခရဈစတီယာနို ပငျနယျတီ လှဲတာပဲ ဖွဈဖွဈ ပှဲကွီးပှဲကောငျးတှမှော ကရြှုံးတာပဲ ဖွဈဖွဈ ဒီလို အခွအေနေ ကို လကျနကျပွငျပွီး အသငျ့စောငျ့ နမေယျ ဆိုတာ ကြှနျတျော သိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ ဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးပါ။ ကိုယျ့အနနေဲ့ ပွငျဆငျ ထားရမှာပါ။ ကြှနျတျောဟာ အခုထိ နှဈပေါငျးမြားစှာ ပွငျဆငျ ထားခဲ့ပွီး ပါပွီ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ရျောနယျဒို ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကို ပြျောရှငျ နှဈသကျနပွေီး သူ့အနနေဲ့ ဝဖေနျသူတှကေို ဆကျလကျ အံ့အားသငျ့စဖေို့ အတှကျ မြှျောလငျ့ ထားတယျလို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ပျေါတူဂီ စတား က “ဘောလုံးကို ဆောငျရှကျ ရမယျ့ တာဝနျ တဈခုလို့ ကြှနျတျော မွငျထားပါတယျ။ ကှငျးထဲကိုသှား ၊ အနိုငျယူ ၊ ဒါဟာ ကြှနျတေျာ့ကို ပိုကောငျး စပေါတယျ။ ကှငျးထဲကို သှားပွီး ငါလိမျခေါကျတာတှေ လုပျမယျ ဆိုတဲ့ ကာလတှဟော ရိုးရိုးသားသား ပွောရရငျ အခုခြိနျမှာ မရှိတော့ ပါဘူး။
အပိုဖိအားတှေ ရှိနပေါတယျ။ လူတှဟော အမွဲတမျး အကဲဖွတျ နပေါတယျ။ ‘သူရဲ့ အကောငျးဆုံး အခြိနျတှေ ပွီးသှားပွီ။ သူဟာ ၃၃ ၊ ၃၄ ၊ ၃၅ ရှိသှားပွီ။ သူနားသငျ့ပွီ။’ အဲဒီလို မြိုးရငျ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ လူတှကေို အံ့အားသငျ့ စခေငျြပါတယျ။” လို့ ပွောသှား ပါတယျ။